အကောင်းဆုံး 3D Wallpaper ထုတ်လုပ်သူနှင့်စက်ရုံ | Yilibao
အဆိပ်အတောက်ကင်းသောနှင့်ဂေဟစနစ် - XPE နံရံကပ်စတစ်ကာများကိုဘေးကင်းလုံခြုံ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အဆိပ်အတောက်ကင်းသောပစ္စည်းများဖြစ်သော XPE မြှုပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
၁။ အဆိပ်အတောက်ကင်းသောနှင့်ဂေဟစနစ် - XPE နံရံကပ်စတစ်ကာများကိုဘေးကင်းလုံခြုံသောပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်အဆိပ်အတောက်ကင်းသောပစ္စည်းများဖြစ်သော XPE အမြှုပ်များဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
၂။ ခိုင်ခံ့သောအရည်အသွေး - ထူထဲသောဒီဇိုင်းသည်စေးကပ်စေးကပ်သည်၊ နူးညံ့။ ဝတ်ဆင်နိုင်သည်။
3. အမျိုးမျိုးသောစတိုင်များ - 3D ရှုထောင့်သုံးဖက်မြင်၊ ကြည်လင်ပြတ်သားသောအရောင်၊ ကြွယ် ၀ ပြီးမတူကွဲပြားသောအရောင်များ၊
4. သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်လွယ်ကူခြင်း - ရေစိုခံ၊
နောက်ခံပုံများသည်အိမ်များ၊ ရုံးများ၊ ဟိုတယ်များ၊ ဟိုတယ်များအတွင်းပိုင်းအလှဆင်ရာတွင်အသုံးပြုသောအတွင်းနံရံကပ်ကပ်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုသောအတွင်းပိုင်းအလှဆင်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စက္ကူဖြင့်သာကန့်သတ်ထားသည်သာမကအခြားပစ္စည်းများလည်းပါ ၀ င်သည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်အရောင်အမျိုးမျိုး၊ ကြွယ်ဝသောပုံစံများ၊ ဇိမ်ခံစတိုင်၊ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှု၊ အဆင်ပြေသောဆောက်လုပ်ရေးနှင့်စျေးနှုန်းချိုသာသောအခြားအတွင်းပိုင်းအလှဆင်ပစ္စည်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
များသောအားဖြင့်အရောင်ချွတ်ထားသောဓာတုသစ်သားပျော့ဖတ်ကိုအခြေခံစက္ကူများထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည်။ ထို့နောက်စက်ရုံများမထွက်ခွာမီဖုံးအုပ်ခြင်း၊ ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ခိုင်ခံ့မှု၊ မာကျောမှု၊ လှပသောရုပ်သွင်နှင့်ရေခံနိုင်စွမ်းအချို့ရှိသည်။
●လုပ်ငန်းသက်တမ်းကြာရှည် - နံရံကပ်နံရံကပ်ဒီဇိုင်းများကိုအဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာဖြင့်အသုံးပြုပါ။ ၎င်းသည်၎င်း၏ပစ္စည်းသည်ပိုကောင်းပြီး၊
●ဆောက်လုပ်ရေးအမြန်နှုန်းသည်မြန်ပြီးသန့်ရှင်းသည်။ နံရံကိုဆေးသုတ်ရန်ခဲယဉ်းပြီးအချို့သောအစွန်းအထင်းများကိုစွန့်ပစ်ပြီးဖယ်ရှားရန်ခက်ခဲသည်။ သို့သော်ကော်သည်စကိတ်ဘုတ်သို့မဟုတ်ပြတင်းပေါက်ဘောင်တွင်မတော်တဆဖိတ်ကျလျှင်၊ ကျနော်တို့များသောအားဖြင့်စိုစွတ်သောအဝတ်အစားသို့မဟုတ်ရေမြှုပ်ကိုအသုံးပြုပါ။ ချက်ချင်းပဲသန့်ရှင်းနိုင်တယ်
●ကြွယ်ဝတဲ့စတိုင်လ် - သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောနောက်ခံပုံကိုရွေးချယ်ပြီးသင်လိုချင်သောမည်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမဆိုဖန်တီးပါ။
# ကြီးမားသောစျေးကွက်နေရာ - စျေးနှုန်းသည်အဆင့်အမျိုးမျိုး၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။
PE အိတ်၊ သေတ္တာသို့မဟုတ် Big ယက်အိတ်။
ရှေ့သို့ XPE ပဟေPuzzleိ Mat
နောက်တစ်ခု: EPE ပဟေPuzzleိ Mat